Purism Librem 14 iri kutengeswa muna Zvita | Linux Vakapindwa muropa
Kana uri kutarisa Laptop nyowani neLinux, pamwe kuda kumirira mwedzi mishoma. Purism yazivisa kuti iyo Librem 14 laptop icharova muzvitoro muna Zvita.
Pataitarisira izvozvo Purism ichavhura iyo freem 14 pakutanga, pakutanga kwekota yekupedzisira yegore sezvaakange azivisa. Iwo matambudziko Intel aive nawo chigadzirwa yemachipisi matsva akakonzera kuvhurwa kunonoka kusvika Zvita.
Maererano ne Purism, iyo laputopu ichaenderera ine dhisikaundi yemadhora zana emadhora kusvika panguva yekutanga kwayo, mushure inogona kutengwa ne $ 1,499 madhora.
Unyanzvi magadzirirwo e Purism freem 14
Kana iwe uri kushamisika, iyo chinotakurika freem 14 yaifungidzirwa kuve imwe yeakanakisa malaptop neLinux, uchishandisa akakwira-magumo specs eizvozvo.
Chishandiso chinofambiswa ne Intel Core i7 10710u processor ine 6 cores uye 12 tambo. Iyo chip ichave yakarongedzwa neinosvika 64 GB ye RAM, nepo iko kuchengetedza ndizvo kutarisira maviri disc slots NVMe, Mumwe chete sarudzo mifananidzo ndeyeIntel UHD GPU yakabatanidzwa.
Mukuwedzera Hardware, zvakare iwe unogona kusarudza kubva kune akati wandei mafirawares, asi default defaultwares ari musimboti y GungwaBIOS. Nezve iyo inoshanda system, iyo mahara 14 inouya neiyo Pure OS.
Purism ikambani yakanangana nekuvanzika kwevashandisi, ndosaka iyo freem 14 inouya nezvakawanda switch yemuviri yekamera, maikorofoni, isina waya kubatana uye Bluetooth.
Panguva ino, isu tine mwedzi mishoma kubva pakuve neiyo freem Gumiguru 14, kana usati wairaira unogona kuzviita uchishandisa iyo yepamutemo peji.
Vatengi vasingagare muUnited States, vanofanirwa kuziva kuti vanozotarisira mari yekutumira. Purism kana ichipa Kutumira pasi rose, asi kuEurope mimwe mitero inofanira kubhadharwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Purism Librem 14 iri kutengeswa muna Zvita